Muuri News Network » Wasiir: Xuseen Cali Xaaji iyo Xildhibaan Xuseen Cali Macalimuu oo booqday goobo badan oo ka tirsan Magaalda Marka.
Wasiir: Xuseen Cali Xaaji iyo Xildhibaan Xuseen Cali Macalimuu oo booqday goobo badan oo ka tirsan Magaalda Marka.
Jun 22, 2016 - Comments off
Mas’uuliyiin ka socda Maamulka Koonfur Galbeed oo dhawaanahan ku suganaa Magaalada Marka, ayaa maanta waxa ay booqasho ku tageen Isbitaalka weyn ee Magaalada Marka, Xarunta Dowlada hoose, Saldhiga iyo Suqa weyn ee Magaalada Marka.
Mas’uuliyiintan oo maalmahaamba howlo shaqo u joogay Magaalada Marka ayaa waxa ay kala yihiin Wasiir ku xigeenka Arimaha Gudaha Xuseen Cali Xaaji, Xildhibaan Xuseen Cali Macalimuu iyo Xildhibaan Maxamuud Jiis.
Goobaha maanta ay booqashada ku tageen Mas’uuliyiintan waxaa ka mid ah Isbitaalka weyn ee Magaalada Marka, halkaasi oo ay kula kulmeen Maamulka iyo Howlwadeenada Isbitaalka iyo sido kale Bukaanadii halkaasi ku jiray.
Sidoo kale Wafidgan waxaa ay booqdeen Suqa weyn ee Magaalada Marka, iyagoona halkaasi kula kulmay Guddiga ganacsatada Suuqa, kuwaaso sharaxaad ka bixiyay sida uu u socdo dhaqdhaqaaqa Suuqa Magaalada Marka.
Xarunta Dowlada hoose iyo Saldhiga Magaalada ayaa ka mid ahaa goobihii maanta ay booqdeen wafdigan, waxaana halkaasi ka dhacay Shir Sedex geesood ah oo u dhaxeeyay Mas’uuliyiinta ka socda Maamulka Koonfur Galbeed, Saraakiisha Amisom ee Marka iyo Ciidamo wata Shaar Dowladeed balse u abaabulan qaab qabiil gacantana ku haaya Xarumahaas.
Mas’uuliyiintan ayaa waxaa ay dadaal xoogan ugu jiraan Sidii Magaalada Marka dib loogu soo celin lahaa gacanta Dadka Deegaanka.